116 Ndinoda JehovhaNekuti anonzwa* inzwi rangu, pandinochemera kubatsirwa.+ 2 Nekuti anorerekera nzeve yake kwandiri,*+Uye ndichadana kwaari chero bedzi ndiri mupenyu.* 3 Tambo dzerufu dzakandikomba;Guva rakandibata.*+ Ndakakurirwa nematambudziko nekusuruvara.+ 4 Asi ndakadana zita raJehovha ndichiti:+ “Haiwa Jehovha, ndinunureiwo!”* 5 Jehovha ane tsitsi* uye akarurama;+Mwari wedu ane ngoni.+ 6 Jehovha anochengetedza munhu asina ruzivo.+ Ndakanga ndaderedzwa uye akandiponesa. 7 Mweya* wangu ngauzorore zvakare,Nekuti Jehovha akandibata zvakanaka. 8 Makandinunura* parufu,Makanunura ziso rangu pamisodzi, tsoka yangu pakugumburwa.+ 9 Ndichafamba pamberi paJehovha munyika yevapenyu. 10 Ndakanga ndiine kutenda, saka ndakataura;+Ndaitambudzika kwazvo. 11 Kana ndiri ini, ndakarohwa nehana ndikati: “Munhu wese murevi wenhema.”+ 12 Ndicharipa Jehovha nechiiNekuda kwezvinhu zvese zvakanaka zvaakandiitira? 13 Ndichatora kapu yeruponeso,*Uye ndichadana zita raJehovha. 14 Ndicharipa mhiko dzangu kuna JehovhaPamberi pevanhu vake vese.+ 15 Nyaya inokosha kuna JehovhaRufu rwevanhu vake vakavimbika.+ 16 Ndinokukumbiraiwo Jehovha,Nekuti ndiri mushumiri wenyu. Ndiri mushumiri wenyu, mwanakomana wemurandasikana wenyu. Makandisunungura pazvisungo zvangu.+ 17 Ndichakupai chibayiro chekuonga;+Ndichadana zita raJehovha. 18 Ndicharipa mhiko dzangu kuna Jehovha+Pamberi pevanhu vake vese,+ 19 Muzvivanze zveimba yaJehovha,+Pakati pako, haiwa Jerusarema. Rumbidzai Jah!*+
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Ndinoda nekuti Jehovha anonzwa.”
^ Kana kuti “anokotama kuti andinzwe.”
^ ChiHeb., “mumazuva angu.”
^ ChiHeb., “Matambudziko eSheori akandiwana.”
^ Kana kuti “yeruponeso rukuru.”